ရွှေမှုန်ရတီ ရဲ့ ပညာရေးအခြေအနေနှင့် သူမ ဒီနှစ် ၁ဝတန်းစာမေးပွဲထပ်ဖြေအုံး မှာလား??? - Myanmarload
ရွှေမှုန်ရတီ ရဲ့ ပညာရေးအခြေအနေနှင့် သူမ ဒီနှစ် ၁ဝတန်းစာမေးပွဲထပ်ဖြေအုံး မှာလား???
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် တုန်းက ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ မ ဖြေခင် အချိန်မှာ ရွှေမှုန်ရတီဟာ 'အနူးဘစ်' ရုံကြီးကားကို ရိုက်ပြီး ရုပ်ရှင်တွေကို ဇာတ်တိုက်ရိုက်ကာ ဖြေခဲ့တဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ နံနက် ၆ နာရီလောက် ကျူရှင် သွားကာ အနုပညာလုပ်ငန်း နှင့် နပန်းလုံးကာ ဖြေခဲ့ပြီး စာမေးပွဲ ကျရှုံးခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ယခုလိုစွန့်လွှတ်မှုတွေကြောင့် အနုပညာလုပ်ငန်းမှာ အတော်အသင့် နာမည်ရလာတဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၁ဝတန်းစာမေးပွဲဟာ ဘဝကြီးအတွက် အရေးကြီးလှ တယ်လို့ မဆိုရပေမယ့်လဲ အများအလယ်မှာ နာမည်လှစေဖို့အတွက် လိုအပ်ကြစမြဲပါ။ အဖက်ဖက်မှ ပြည့်စုံမှလည်း ဖြစ်မှာကို။ သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေက လည်း စာမေးပွဲဖြေစေချင်ကြပြီး သူမဒီ နှစ်မဖြေဘူးဆိုရင် နောက်နှစ်မှာ သူမညီမ ငွေမှုန်ရတီနှင့် အတူတူ စာမေးပွဲဖြေမှာလားဆိုတာတော့ ခန့်မှန်းလို့မရသေးသော်လည်း နောက်နှစ်မှာ မ ဖြေရှင် ၁၁တန်းနှင့် တိုးမှာ အသေအချာပါဘဲ။
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိတဲ့ အတွက် အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေရယ် ရွှေမှုန်ရဲ့ ချစ်ချစ် ဦးဦး ကြီးရယ်ကို ခဏ ခွင့်တောင်းပြီး ပညာရေးဘက်လည်း ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ် ရွှေမှုန်လေးရေ....